गृहमन्त्री प्रभाकरको पहिलो शासन: प्रहरी कमाण्डर थर्कमान, सिपाहीहरु खुशीले गद्‍गद्‍ !
ARCHIVE, NEWSPAPER » गृहमन्त्री प्रभाकरको पहिलो शासन: प्रहरी कमाण्डर थर्कमान, सिपाहीहरु खुशीले गद्‍गद्‍ !
नवनियुक्त गृहमन्त्री प्रभाकरले बुधबार पदबहाली गरेका छन् । दिउँसो गृहमन्त्रालयमा पदबहालीपछि प्रहरीलाई संगठनभित्र खेल्ने, अनुशासन तोड्ने र सरकारको नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा अवरोध गर्नेलाई नछोड्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रभाकरले आफू सिपाहीदेखि महानिरीक्षकसँग समेत मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए । उनले राम्रा कामका लागि सिपाहीको समेत सुझाव लिएर काम गर्ने उल्लेख गरे । सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमाण्ड’ सुदृढ गरिने तथा जनता र सिपाहीबाट हुने मूल्यांकनलाई सही मानिने उनले बताए । साथै उनले केही दिनमा नै आफ्नो नयाँ योजना ल्याउने बताए ।
सैन्य पृष्ठभूमिका गृहमन्त्री प्रभाकरले प्रहरीलाई चेन अफ कमान्डमा रहन भन्दै कमाण्डरको मूल्यांन जनता र सिपाहीबाट गरिने बताए ।